အ ၀ တ်အစားမပါသည့်အဆွဲအစက်စက်ရုံ | တရုတ် Non- ယက်ဆွဲကြိုးအိတ်ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်း
1. ပစ္စည်း: 40-100 gm Non- ယက် Polypropylene အိတ်
3. စျေးပေါသောအဆင်တန်ဆာအိတ်များသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လက်ကားဆွဲဆွဲအိတ်သည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောစျေးပေါသောအံဆွဲအိတ်သည်ကြာရှည်စွာတည်ရှိလိမ့်မည်၊ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်အဖြစ်အပျက်ကိုစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းကြော်ငြာရန်အလွန်သင့်တော်သည်။